Daawo Sawirada: Labo Nin oo Naxash ku riday Nin nool oo Xukun adag lagu riday – dulmidiid
Daawo Sawirada: Labo Nin oo Naxash ku riday Nin nool oo Xukun adag lagu riday
Labo Nin oo Beeraley ah kana mid ah cadaanka kunool dalka Koonfur Afrika ayaa lagu riday xukun adag oo xabsi ah, kadib markii lagu helay dambi ah in ay naxashka Meydka ku rideen Nin nool oo beertooda kusoo xadgudbay.
Willem Oosthuizen iyo Theo Jackson ayaa ku qasbay nin Madow ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika in uu galo naxashka Meydka, waxa ayna ugu hanjabeen hadii uu amarkaasi diido in ay nolosha ku gubayaan ayna dilayaan.
Labadan Nin ayaa Maxkamad ku heshay dambi ah in Victor Mlotshwa oo ay ku xireen naxash, ka dib markii ay ku eedeeyeen inuu beertooda ku xadgudbay, waxa ayna ragan qirteen kaliya in ay doonayeen in ay ciqaabaan balse aysan rabin in ay dilaan.
Dhibane Victor Mlotshwa oo ku sugnaa Maxkamada xukunka ku riday ragan dhibka u geestay ayaa u muuqday mid ku faraxsan sida maxkamada u dhacday, waxa uuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in cadaalada ay shaqeysay.
Muuqaal laga duubay Dhacdadan oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada ayaa sababtay in lasoo xiro ragan cadaanka ah ee dhibka u geestay ninka Madowga ah, waxaana dhacdadan aad uga carooday dad badan oo daawaday.